अश्लेषाको वार्डरोव मालफङ्सन, जानीजानी कि नियती ? « Ramailo छ
अश्लेषाको वार्डरोव मालफङ्सन, जानीजानी कि नियती ?
फिल्म ‘प्रेम गीत २’ की नायिका अश्लेष ठकुरी मालफङनसको शिकार भएकी छिन् । फिल्म प्रचारको लागि देश दौडाहमा रहेको टिमले आइतबार साँझ नेपालगञ्जको रामलिला मैदानमा साँस्कृतिक कार्यक्रम गरेको थियो । सोही कार्यक्रममा नाच्ने क्रममा नायिका ठकुरी मालफङसनको शिकार भएकी हुन् । अश्लेषाले अव्डरवेयर नलगाएको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा छ्याप्छ्याप्ती भैरहेको छ ।
नेपालगञ्जका सञ्चारकर्मी समिर श्रेष्ठले ‘यो फिल्मको प्रचार थियो कि नाकिया अश्लेषाको…प्रदर्शन !’ भन्दै तस्बिर सहितको स्टाटस पोस्ट गरेका छन् । भित्री वस्त्र बिना नायिकाले नृत्य प्रस्तुत गरेपछि प्रहरी प्रशासनले समेत चासो लिएको त्यहाँका एक सञ्चारकर्मी बताएका छन् । ‘नेपालगञ्जमै अहिले यस्कै चर्चा छ’, उनले भने । उसो त फिल्म प्रदर्शनका बेला कलाकारहरुले विभिन्न हत्कण्डा मच्याउनु बलिउडदेखि नेपालसम्म सामान्य बन्दै गैरहेको छ । भर्खरै फिल्म क्षेत्रमा आएकी नायिका अश्लेषाले फिल्मको थप प्रचारको लागि त्यसो गरिन् या भुलवश हुन गयो ? त्यो उनैलाई थाहा होला ।
तर उनले नियतवश त्यस्तो गरेको हो भने यो उनी स्वयम र नेपाली फिल्म क्षेत्रको बेइज्जती हो । भूलवश त्यस्तो हुन गएको हो भने पनि दर्शकमाझ आफ्नो प्रस्तुती दिन जाँदा त्यस्तो संवेदनशील कुरामा उनले हेक्का राख्नै पथ्र्यो । अश्लेषासँग नायक प्रदीप खड्काले नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए ।